युरोपमा केहि सुन्दर दृश्यहरू अमूल्य छन् र पुग्न सजिलो छ. तैपनि, युरोप को लागी यात्रा एकदम महँगो पर्न सक्छ यदि तपाई अग्रिम योजना बनाउनु हुन्न भने. जबकि अधिकांश यूरोपीय क्यापिटलहरूले तपाईंको यात्रा बजेट तान्नेछन्, युरोपमा यात्रा गर्नको लागि त्यहाँ केहि ठाउँहरू छन् जुन पूर्ण रूपमा किफायती छ. हाम्रो शीर्ष7युरोपमा यात्रा गर्नको लागि सब भन्दा सस्तो ठाउँहरू पूर्ण बजेट-मैत्री छन् र प्रति व्यक्ति day €० भन्दा बढी हुनेछैन.
यी लुकेका रत्नहरू सुन्दरता र जादूमा धेरै पछाडि ढल्दैनन्, पेरिस र बर्लिन जस्ता शहरहरू भन्दा.
साथै, को सबै भन्दा प्रसिद्ध ल्यान्डमार्क जर्मनीमा, एक अद्भुत कोलोन क्याथेड्रल भ्रमण गर्न स्वतन्त्र छ. यसको गोथिक वास्तुकला, चित्रित गिलास विन्डोजहरू, र नदीका दृश्यहरू महाकाव्य हुन्. यदि तपाईं कला मन पराउनुहुन्छ, त्यसपछि कोलोन छ महान संग्रहालयहरु वा मनमोहक सडक कला Ehrenfeld मा. यो क्षेत्र कोलोनको हिप र ट्रेंडी अंश हो, कफी र पुरानो को लागी जाने ठाउँ.
यो शहर अद्भुत महल र बगैंचाहरूको घर छ जुन भेट्न स्वतन्त्र छ, र यदि तपाईं महाकाव्य दृश्यहरूको लागि आरोहण गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि टावरमा प्रवेश शुल्क भन्दा कम छ5यूरो. शहर अन्वेषण गर्न अर्को उत्तम विकल्प भनेको स्वतन्त्र पैदल यात्रामा सम्मिलित हुन र अन्य यात्रुहरूलाई भेट्ने वा पुस्तक बुक गरेर हो सेस्की क्रुमलोभ निजी शहर पैदल यात्रा गिरोह को लागी. यस तरिकाले तपाईले शहरको रहस्य पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, किंवदन्तीहरु, र एक परी कथा भूमिमा आश्चर्यजनक यात्रा गर्न सुझावहरू.
एगर बुडापेस्टबाट एक आराम स्पा सप्ताहन्तको लागि उत्तम छ. छनौट एक दिन यात्रा को बीच वा बुडापेस्ट बाट एक शहर ब्रेक सबै तपाइँको हो, तर हामी सिफारिस गर्दछौं कम्तिमा लामो यस सप्ताहन्त शहर मा एक सप्ताहन्त खर्च गर्न.
गोल्डन किनारहरू, जोन अफ आर्क अफ रुएनका किंवदन्तीहरू, मोन्ट सेन्ट द्वीप. मिशेल मठ, नर्मन्डीमा केवल केही रत्नहरू हुन्. यो सुन्दर क्षेत्र पेरिसबाट दुई घण्टाको यात्रा हो, तर फ्रान्सेली राजधानी भन्दा फरक छ, यो फ्रान्स मा यात्रा को लागी सबैभन्दा सस्तो ठाउँ हो.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाइँलाई ट्रेन द्वारा यूरोप मा सबैभन्दा सस्तो ठाउँहरु को लागी तपाइँको छुट्टी को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा यात्रा गर्नको लागि Most सब भन्दा सस्तो स्थान" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
किफायती यात्रा बजेटट्राभल सस्तोट्राभेल चेक गणतन्त्र रेल यात्रा बेल्जियम रेल यात्रा हंगेरी travelfrance travelgermany